रक्सी खानेलाई २५ सय जरिवाना !
घाटगाउँ डटकम सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, २२:१४:००
३ कार्तिक, सुर्खेत । विगत बर्षझै चौकुने गाउँपालिकाले रक्सी बनाउने र खानेलाई कारवाही गर्ने भएको छ । अरु बेला वास्तै नगर्ने चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ९ र १० ले यस बर्ष दशैँ तिहारमा रक्सी बनाउने र वितरण गर्नेलाई २५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको हो ।
यस्तै रक्सी खाएर होहल्ला गर्नेलाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । रक्सी खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भने सर्वसाधारणको भन्दा कडा कारवाही छ । यदि कुनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जाडँ रक्सी खाएर हो-हल्ला गरेमा २५ सय जरिवाना तिराउने निर्णय चौकुने ९ र १० नम्बर वडाले गरेका छन् ।
शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले दशैँ तिहारलाई मर्यादित बनाउन जाँडरक्सी उत्पादन, वितरण र सेवन गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपी यो निर्णय कागजमा गरेर सार्वजनिक गरिएपनि कागजमै सिमित हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, २२:१४:००
सुनको मूल्य फेरी घट्यो सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, २२:१४:००
खुल्न थाले शक्तिपीठ सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, २२:१४:००
क्याम्पसमा गोली चल्दा आठ जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, २२:१४:००
हिलोले कर्णाली राजमार्गमा सवारी साधनलाई सास्ती सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, २२:१४:००